Baro Ingiriisi Online - websites Best in ay bartaan Ingiriisi | Refugee Center Online
websites Best si ay u bartaan hadalka English iyo naxwaha online
Waxaad baran kartaa wada hadalka English iyo naxwaha online la khayraadka ESL online lacag la'aan ah. Macluumaadka on this page waxaa ka mid ah qaar ka mid ah fasalada ugu wanaagsan lacag la'aan ah Ingiriisi iyo barnaamijyada aannu u helay online.
websites ugu wanaagsan ee barashada Ingiriisiga
Refugee Center Online Fasalka
In kasta oo fasalada waxaa diiradda lagu saaray GED iyo Dhalashada, iyagu waa fasallo aad u wanaagsan si ay uga caawiyaan in aad bartaan Ingiriisi, sababtoo ah waxaad ku baran kartaa Ingiriis, halka sidoo kale arkaysid fasalada afkaaga. Tani waxay kaa caawinaysaa in aad Ingiriisi dhaqso u bartaan.
koorsooyin gaagaaban iyo videos in lagaa caawiyo inaad hesho xirfado cusub dhegaysiga.
Dhegaysiga iyo warqadii loogu talagalay heerarka kala duwan ee ku hadla ESL ku salaysan dhacdooyinka hadda.
koorsooyinka Interactive bulshada dunida oo dhan barashada luqadda.
Ka caawisaa xirfadaha dhagaysiga. Waxaad dooran kartaa mawduucyo ku salaysan danaha shakhsiga ah sida isboortiga, taariikhda, ama safarka.
Website-kani waxa uu leeyahay qoaran waraaqaha waaweyn iyo kuwa yaryar waxaad isticmaali kartaa in aad ku tababarato Ingiriisi.
Website-kani wuxuu bixiyaa casharada online lacag la'aan ah iyo kheyraadka, badan oo jimicsi mowduucyo naxwaha kala duwan
imtixaan free badan oo kala duwan (sida TOEFL ah) inay kaa caawiyaan inaad u diyaar garoobaan imtixaanada af Ingiriisi dugsiga ama goobta shaqada.
Miyuu khayraadka badan ESL kala duwan, oo ay ku jiraan in ka badan 2000 videos hadalka Ingiriisi aad ka daawan kartaa.
website A in canaanto khaladaadka dadka, la apps aad kala soo bixi kartaa si aad u hubiso in aad qoraal ahaan. Waxa kale oo jira buug ay website bixiya sharaxaad cad oo ku saabsan naxwaha, xarakayn iyo mawduucyada kale ee.
Kaa caawinaysaa in aad bartaan in ay qoraan in Ingiriisi la caawimaad ka midaa hooyo.
Grammar iyo ku dhawaaq Talooyin.
USA barto waxay leedahay saddex koorsooyinka Ingiriisi free inuu kaa caawiyo inaad bilowgii iyo Ingiriisi dhexe bartaan
VOA Inglês Gaarka ah
Dhageyso warka in English gaabis ah si loo hubiyo xirfadaha fahamka aad.
Kaa caawinaysaa in aad helaan xirfado cusub erayada.
GlobalEnglish leeyahay koorsooyin online si ay uga caawiyaan in aad baratid Ingiriisiga aad u isticmaali karto shaqada. magacaaga iyo email u dir info@therefugeecenter.org inay la soo wareegto ilaa fasalada free.
apps ugu wanaagsan ee barashada Ingiriisiga
Duolingo diiwaanka marka aad ku hadasho si uu kaaga caawiyo dhawaaq.
app kani waxa uu isticmaalaa dhabta ah videos si uu kaaga caawiyo ka hadla dhabta ah hooyo bartaan. Waxaad daawan kartaa mawduucyo kala duwan.
Ma rabtaa in aad in ay ku dhaqmaan qoraal iyo barashada Ingiriisiga? Waxaan bixinaa Arts GED Language fasalka diyaarinta a free imtixaanka.
Inkastoo class this waa in la caawiyo ardayda barashada ay GED, waxa ay sidoo kale kaa caawin kara inaad barato oo aad u hagaajisid Ingiriisi. Tag fasalka Language Arts GED hadda.